Total War: Warhamer II The Prophet & The Warlock သည် macOS တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
Total War: Warhamer II The Prophet & The Warlock DLC သည် macOS တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Este စုစုပေါင်းစစ်ပွဲ - WARHAMMER II - တမန်တော်နှင့် The Witcher DLC macOS နှင့် Linux အသုံးပြုသူများအတွက်ယနေ့ရရှိနိုင်။ Feral Interactive သည်ကိစ္စရပ်များစွာတွင် MacOS အသုံးပြုသူများအားဂိမ်းကိုသယ်ဆောင်ပေးသည့် developer နှင့်တူသည်။
တရားဝင်ကြေငြာချက်သည်Aprilပြီလအစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးယခု DLC အသစ်သည်၎င်းကိုလွှတ်တင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသော Mac သုံးစွဲသူများအတွက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းကို Feral Interactive မှ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်လူသိများသော Steam gaming platform မှသာရနိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင် စျေးနှုန်း $ 8.99 / £ 6.99 / € 8,49 ဖြစ်ပါတယ်.
Warhammer Fantasy Battle မှပြိုင်ဘက် Lord နှစ် ဦး သည် DLC တွင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည် တမန်တော်နှင့် Wizard အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် ပူနွေး II ကို အခုကနေ Ikit Claw သည်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာနှင့် Skaven အဖွဲ့၏ Skryre မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ သူ၏သိပ္ပံဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုကြီးမားသောဗုံးဖြစ်သည့် Doomsphere ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Tehenhauin သည် Sotek ပုတ်သင်ညိုများကိုးကွယ်သောခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်မြွေဘုရား။ Skaven အကျဉ်းသားများကို Sotek သို့ပေးဆပ်ခြင်းအားဖြင့် Tehenhauin သည် Ikit Claw ၏အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောရန်သူဖြစ်လာသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ DLC ကို ၀ ယ်ဖို့ကစားစရာတွေအတွက်ကွဲပြားတဲ့သတ်မှတ်ချက်များမလိုအပ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာ War Warhamer II ဂိမ်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်လျှင်အသုံးပြုခြင်းပြproblemsနာမရှိပါ။ ဒီ DLC သည်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Total War: Warhamer II The Prophet & The Warlock DLC သည် macOS တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
သမုဒ္ဒရာထဲမှာနှစ်ဝက်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သင့် Apple Watch ကိုပြန်လည်ရယူပါ